जनताका लागि राजनीति गर्ने नेताको अभाव छ : युगलकिशोर लाल
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक
० स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भएका मधेशकेन्द्रित दलको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
— राजनीति कहिले काहीं जुवा जस्तो पनि हो । सम्भावनाका आधारमा पनि राजनीतिक दलहरूले निर्णय लिने गर्छन् । राजनीति बुद्धिचाल खेल जस्तै हुन्छ । यसमा कोही विजयी प्राप्त गर्छन् भने कोही पराजय भोग्छन् । राजनीतिमा जित र हार सामान्य कुरा हो । तर, कसले सही कदम चाल्यो भन्ने कुरा समयले बताउनेछ । दलहरूको असन्तुष्टिका बाबजुद चुनाव गरिएको अन्य देशमा पनि कैयौं उदाहरण छन् । म भारतको उदाहरण दिन चाहन्छु । त्यहाँ सन् १९३५ मा अग्रेजले दिएको संविधानअन्तर्गत प्रान्तीय चुनाव भएको थियो । जसमा एक मात्र सुवासचन्द्र बोसले विरोध गरेका थिए । बाँकी मोती लाल, जवाहरलाल नेहरु, पटेल, राजेन्द्र प्रसादलगायत सबैले भाग लिए । चुनाव पनि भयो । उनीहरू जिते पनि, सरकार पनि गठन भयो । तर, त्यो सरकार दुई वर्ष पनि चल्न सकेन । सबैले राजीनामा दिएर हट्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यसबेला सबै आत्मसमीक्षा गरे कि हामीले चुनावमा भाग लिएर गल्ती ग¥यौं भनेर । त्यसैले राजनीतिमा को जित्ने र को हार्ने भन्ने कुरा कुर्सीलाई महत्व दिनेहरूका लागि हो । जसलाई राष्ट्रलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्नुछ, जसलाई मानवतालाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्नुछ, त्यसको त बहुत लामो यात्रा हुन्छ ।
० राजनीतिमा जित र हार स्वभाविक होला । तर,पछिल्लो समयमा केही मधेशकेन्द्रित दलले चुनावमा सहभागिता जनाएका छन् । केहीले चुनाव बहिष्कार गरेका छन् । यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
— राजनीति गर्नेहरूले जनताका इच्छा बमोजिम आचरण देखाएका छन् कि छैनन्, त्यो कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । कसैको राजनीति राजदरबारसँग सम्बन्धित थियो । बाहिर बाहिर विरोध गर्दथ्यो, भित्रभित्र उसैबाट प्ररित थियो । कसैको राजनीति कांग्रेससँग प्रेरित छ । कसैको राजनीति चीनसँग प्रेरित छ । कसैको राजनीति भारतसँग प्रेरित छ । कसैको राजनीति अमेरिकाको इशारामा चलेको होला । त्यस्तो राजनीतिक इकाइले आफ्नो आकाको आज्ञाको मात्र पालन गर्छ । उसले स्वतन्त्र राजनीति गर्न सक्दैन । त्यसकारण कसले के भन्छ भन्ने कुरा सोच्ने कुरा होइन । त्यो त समयले नै बताउनेछ ।
० भनेपछि मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि कतैबाट परिचालित छन् ?
— त्यो त मलाई थाहा छैन । आजको युगमा न कुैन व्यक्ति स्वतन्त्र छ, न त कुनै देश, न त कुनै राजनीतिक दल स्वतन्त्र छन् । स्वतन्त्रता नारा मात्रै छ । किन भने नेपाल जस्तो ठाउँमा हामीमध्ये प्राय सर्टिफिकेट दिएका विद्वानहरू मात्र पैदा भएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको लक्ष्य नै सत्तामा पुग्नु हो । सत्तामा पुग्न सहज जहाँबाट हुन्छ, त्यही ऊ जान्छ । केही दिन अघि विजय गच्छदारसँग भेट भएको थियो । आधा घण्टासम्म चलेको भेटका क्रममा उहाँले आफूले हालसम्म राजनीतिमा के–के गरे भन्ने कुरामा नै बिताउनुभयो । भनेपछि त्यस्तो राजनीतिज्ञबाट राष्ट्रको कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा नसोच्नुस् । राजनीतिमा पहिला लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ ।
० मधेशमा पटक पटक आन्दोलन भए । सयभन्दा बढी मानिसले मृत्युवरण गरे । तर, पनि मधेशकेन्द्रित दलको लक्ष्य निर्धारण हुन नसकेको हो । बरु विचलन नै आएको हो ?
— नेताले आफूलाई बिक्री ग¥यो भने कार्यकर्ता पनि बिक्री हुन्छ भन्ने छैन । राजनीति जनताका लागि गरिन्छ । जनताका लागि राजनीति गर्न छाडियो भने नेता कत्ति ठाउँमा बिक्री हुन्छ, त्यसको ठेगान हुँदैन । त्यसकारण जनताका लागि काम नगर्ने नेताहरू आफैं पाखा लाग्छन् । त्यसठाउँमा अर्का नेता आउँछन् । जहाँसम्म मधेश आन्दोलनको कुरा छ, मधेश आन्दोलनका क्रममा टाउको र छातीमा गोली हान्ने काम गरियो, जतिखेर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । तर, के भयो ? फेरि मधेशी नेताहरूले सुशील कोइराला नै भोट दिन गए । नेपालका नागरिक सबै बराबर छन्, बराबर रहनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । मुख्य लडाईंको बिन्दु यो हो । सुशील कोइरालालाई त्यति मधेशीलाई मार्ने अधिकार कसले दियो ? यदि उसले मारेको छैन भने कसको आदेशले मा¥यो ? मान्छे मार्नेमाथि के कारबाही भयो ? मधेश आन्दोलनमा गोली चलाउनेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आवाज किन त्यति उठ्दैन ? गर्नुपर्ने काम हुँदैन । तर, फेरि भोट दिनुप¥यो भने उनीहरूलाई नै दिइन्छ । सुशील आए, प्रचण्ड आए, देउवा आए सबैलाई भोट दिँदै जाने काम भएको त प्रष्टै छ नि । कानुनी राज्यको स्थापना हुनुपर्छ ।
० भनेपछि मधेशकेन्द्रित दलले विगतमा गरेको गल्तीको परिणाम चुनावबाट भोगिरहेका हुन् ?
— म गल्ती भन्दिनँ । भोट दिन जानेलाई राम्रो लागेर दिए ।
० मधेशकेन्द्रित दलहरू मधेशीको चाहनाअनुसार नचलेकै हुन् ?
— जसले अपराध गर्छ, त्यो जति सुकै ठूलो किन नहोस्, सजाय पाउनुपर्छ । यहाँ जन्मेका सबैको बराबर अधिकार हुनुपर्छ । जो गैरबराबरीलाई बढाबा दिन्छन्, ऊ स्वतन्त्रता विरोधी छन् ।
० भनेपछि राजपा पनि यो चुनावमा सहभागी भइदिएको भए, उसको पनि फोरम नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकको जस्तै अवस्था हुन्थ्यो ?
— उनीहरूको के हविगत भयो या हुन्थ्यो भन्ने कुरा चुनाव कसरी भयो भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । जनता कत्ति सक्रिय थिए । केही स्थानमा जति भोट खोस्यो, त्योभन्दा बढी बाकसबाट आइरहेको पनि खबर सुनियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि चुनाव निष्पक्ष गराउन आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसैले चुनाव निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ । त्यसैले चुनावको परिणामले मात्र कसैको प्रभावको आंकलन गर्न सकिँदैन । मनि र मसलको प्रभाव परेको होला । त्यसले चुनावले मात्र जनमतको गणना गर्न सक्दैन ।
० जनता एउटा कुरा सोच्ने तर, नेताले अर्कै कुरा सोच्ने यस्तो समस्या मधेशको राजनीतिमा मात्र छ कि देशकै राजनीतिमा यस्तो देखिएको छ ?
— हेर्नुस्, जनताले एउटा कुरा सोच्नु, नेताले अर्को कुरा सोच्नु यो अस्वभाविक कुरा होइन । नेता यदि इमान्दार छन् भने उसले आफ्नो कुरो जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । जनता भनेको कच्चा माटो हुन् । राजनीतिक दलले सत्ताका लागि होइन, जनतालाई राजनीति चेतना दिने काम पनि गर्नुपर्छ ।
० भनेपछि राजनीति शिक्षा दिने काममा नेकपा एमाले सफल र मधेशकेन्द्रित दल असफल भइरहेको छ ?
— नेकपा एमाले जनतालाई शिक्षाभन्दा पनि मतदातालाई आकर्षित गर्ने कुरामा अगाडि छ । शिक्षा पनि विभिन्न थरिका हुन्छन् । अशिक्षा, शिक्षा, कुशिक्षा, शुशिक्षालगायत छन् । अब एमालेले कुनै न कुनै शिक्षा दिएर भोट चाहीं ल्यायो । तर, भोटले क्षणिक सत्ता प्राप्ति हुन्छ । पञ्चायति व्यवस्था निर्विकल्प छ भन्ने कुरा पनि सर्वसम्मतले पास भएको थियो । खोई कहाँ भयो त निर्विकल्प ? २०१५ सालमा बीपी कोइरालासँग दुई तिहाइ सिट थियो । बीपी कोइराला १८ महिना पनि सरकार चलाउन सकेनन् । त्यसकारण राजनीतिको खेल बुझ्न नसक्ने खेल हो ।